Ụzọ 10 Niile Eke Iji ebelata Ahụhụ Mmiri - Ibi ndụ ahụike 2022
Ụzọ 10 Niile Eke Iji ebelata Ahụhụ Mmiri
Ihe nfụkasị ahụ na-akawanye njọ site na ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe n'etiti njedebe oyi na mmalite nke mmiri ọkụ. Ogo pollen na-ebili, daa, wee bilie ọzọ n'ihi usoro ihu igwe na-enweghị atụ, na-ebute "mmetụta priming."
Onye na-ahụ maka ọrịa nrịanrịa nke Atlanta na onye isi oche gara aga nke American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), Dr. Stanley M. Fineman kwenyere na mgbe onye ọrịa na-ekpughere pollen wee pụtaghachi mgbe e mesịrị mgbe mgbanwe ihu igwe dị egwu, mmeghachi omume nfụkasị ahụ bụ. ọzọ dị ịrịba ama n'ihi na dịghịzi usoro bụ primed ịzaghachi.
N'akụkụ ụsọ oké osimiri ndịda na ọwụwa anyanwụ nke U.S., ọkwa pollen osisi rịgoro wee daa na mbido February, wee gbatịa ọzọ na njedebe nke ọnwa.
"Ihe mgbaàmà ndị a na-ahụkarị bụ mkpọchị, imi na-agba agba, anya na-egbuke egbuke, uzere, anya mmiri, akpịrị akpịrị, akpịrị na-egbuke egbuke, isi ọwụwa, ntị na-egbuke egbuke," ka Dr. Sheila Amar na-ekwu. Ihe nfụkasị ahụ nwekwara ike ịkpalite ụkwara ume ọkụ nye ọtụtụ ndị.
Ekwela ka ihe nfụkasị ahụ n'oge opupu ihe ubi daa gị. Lụọ ọgụ wee gbaghachi azụ site n'ụzọ iri niile sitere n'okike iji belata ihe nfụkasị ahụ.
1. Nyochaa ihe oriri gị
Nri nwere ike imetụta mmetụta allergies nke oge a na-enwe na ahụ. Iri aki oyibo, azụ, mkpụrụ osisi, na akwụkwọ nri nwere ike ime ka mgbaàmà nrịanrịa dị mfe n'ihi ihe ndị na-agbasi mbọ ike na-alụso pollen ọgụ. Omega-3 fatty acids achọtara na mmanụ azụ na mmanụ krill bụ ihe ama ama mgbochi mkpali. Dị ka otu nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ bụ Allergy si kwuo, ụmụaka ndị na-eri azụ mgbe nile tupu ha eruo otu nwere obere allergies site na afọ anọ.
2. Ịzụta ihe na-adịghị egbu egbu, ngwaahịa nhicha eke
Ndị na-ehicha ụlọ, ncha efere, na ncha na-akpalite allergies site na ísì ọjọọ ndị amonia, ikuku fresheners, na ndị na-emepụta ozone na-ewepụta, ka Dr. James L. Sublett, bụ́ onyeisi ngalaba na-ahụ maka nrịanrịa ụmụaka na Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ nke Mahadum Louisville, na-ekwu. Aerosol ihicha sprays nwere ike ịkpalite mgbaàmà nrịanrịa na-ejikọta ya na mmụba nke ụkwara ume ọkụ, ọgwụ ụkwara ume ọkụ, na iku ume. N'akwụkwọ akụkọ American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ndị nyocha nyocha na-akọ na iji ihe na-ehicha ihe na-eme ihe mgbe niile na-eme ka ihe ize ndụ ahụ dịkwuo ukwuu.
3. Jiri ihe mkpuchi kpuchie ihu gị ma ọ bụ yiri ugogbe nchekwa mgbe ị na-arụ ọrụ ụlọ
Iyi ugogbe anya ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ n'èzí na-eme ka pollen na ihe mgbakasị ahụ pụọ n'anya gị, na-ebelata ichichi na ọbara ọbara. Ebe ọ bụ na ọkwa pollen dị elu n'etiti elekere ise nke ụtụtụ na elekere iri nke ụtụtụ, hazie ọrụ n'èzí ka oge a gachara ka ịzenarị ikpughe na iwe ọzọ. Ihe omume ndị dị n'èzí na-adịkwa nchebe n'oge ehihie ma ọ bụ mgbe mmiri ozuzo gasịrị mgbe ọkwa pollen dị ala.
4. Jiri amamihe hichaa ebe obibi gị
Kapeeti na-enye ụdị na nkasi obi mana ha nwekwara ike ịchekwa ihe ndị na-eri ahụ. Ọ bụrụ na ezinụlọ nwere kapet na anụ ụlọ, anụ uzuzu, uzuzu na pollen na-akwakọba. Iji osisi siri ike dochie kapeeti ma ọ bụ ala lineoleum ma ọ bụ akwa ebe a na-asachapụ na-ebelata ihe allergens anakọtara n'ụlọ, dịka ụlọ ọgwụ Mayo siri kwuo. Ngwa, windo, osisi, anụ ụlọ, ọkụ, ákwà mgbochi, na ihe mkpuchi kwesịrị ịdị ọcha nke ọma site na ngwaahịa ihicha a tụrụ aro (lee ntụnye #2).
5. Shampoo nku anya
Ntụnye ncha ntutu nwa obere dime ugboro abụọ n'ụbọchị nwere ike ibelata ichichi, ọbara ọbara na ọzịza n'anya ihe ruru pasenti 90, ndị na-eme nchọpụta na Ụlọ Ọgwụ Long Island nke Brooklyn kwuru. Iji ncha ntutu nwa na-ewepụ pollen nnyapade tupu ọ banye n'anya, ka onyeisi ahụike nke Allergy na Asthma Care nke New York, Dr. Clifford Bassett na-akọwa. Mgbe ị gachara n'èzí, hichaa ihe ndị dị na pollen ndị nwere ike ịdonye ngwa ngwa na ntutu ma rapara na akpụkpọ ahụ.
6. Rie yogọt nwere probiotics
Yogọt dị larịị nwere probiotics nke na-ebelata ọkwa ọgwụ mgbochi na-emepụta ihe mgbaàmà. Yogọt na-ebelata mgbaàmà mgbari nri nke na-ebutekarị ihe nfụkasị nri na enweghị ndidi. Dị ka akwụkwọ akụkọ The Harvard Medical School Guide to Healthy Eating during Pregnancy nke W. Allan Walker na Courtney Humphries si kwuo, ụmụ ọhụrụ nke ndị inyom na-eri probiotics n'oge ime ime na-egosi ọkara nke mgbaàmà nrịanrịa karịa ụmụ ọhụrụ nke ndị inyom na-adịghị. Yogọt nwere omenala na-arụsi ọrụ ike kacha mma.
7. Sip na ụfọdụ oji ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iced tii
Tii ojii na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ breed nwere okpukpu iri karịa nke antioxidants dị na mkpụrụ osisi na veggies. Antioxidants dị na teas na-aba uru nke ukwuu maka ahụ mmadụ ma nwee ike gbanwee metabolism nke mmadụ iji wepụ kemịkalụ na-emerụ ahụ, ka John Weisburger, PhD, onye nchọpụta agadi na Institute for Cancer Prevention na Valhalla, NY na-ekwu, uru nke tii na-agbatị n'èzí nke allergies na nwere ike. a ga-eji belata ibu, ịlụso ọrịa shuga ọgụ, na ọrịa obi.
8. Wụnye ihe nzacha ọkụ
Ihe nzacha ihe nfụkasị ahụ nke ụlọ ahịa zụtara nke ukwuu nwere ike belata ihe ruru okpukpu abụọ karịa nke ikuku ikuku ma e jiri ya tụnyere ihe nzacha dị elu. Ụlọ akwụkwọ American College of Allergy, Asthma and Immunology na-atụ aro ịhapụ onye ofufe na "iji mepụta nzacha ikuku nke ụlọ dum nke na-ewepụ ihe ndị na-emepụta ihe." Ọ dị mkpa ịgbanwe nzacha kwa ọnwa atọ ka ikuku dị ọcha kwa afọ.
9. Yiri owu na akwa ndị ọzọ eke
Wepu ma sachaa uwe ndị eyigoro n'èzí ozugbo ịbanye n'ụlọ gị. Ime otú ahụ ga-egbochi pollen ọ bụla ịwụfu n'ime ngwá ụlọ na ihe ndina. Ihe ndị sịntetịt, dị ka polyester na naịlọn, nwere ike wuo ọkụ eletrik nke na-ebupụ pollen n'ikuku ma banye n'ime ahụ, ndị na-eme nchọpụta na Philadelphia's Jefferson Medical College Hospital kwuru. Ọ dị mkpa iyi owu, linen na akwa ndị ọzọ na-adịghị adọta pollen.
10. Nwee ezumike n'akụkụ mmiri n'oge mmiri
Ọkwa pollen na-adịkarị ala n'akụkụ ozu mmiri. Ndị na-enwekarị allergies ga-enweta nkasi obi na-eleta ọdọ mmiri ma ọ bụ osimiri. Dr. Russell B. Leftwich, onye na-ahụ maka ọrịa ahụ na onye na-ekwuchitere American Academy of Allergy, Asthma & Immunology na-ekwu "ọ bụrụ na ị nwere ike ibi ndụ na nkeji mbụ nke mbụ site n'ụsọ osimiri, ọ dị mma."
Ụzọ iri ndị a na-adị ndụ iji belata allergies n'oge opupu ihe ubi ga-enyere aka ịlụso ọkwa pollen dị njọ ọgụ.